Andriamparany : Efa nifandovana ny fivarotana lambamena - L'Hebdo de Madagascar
Actualites • Onjam-piainana
Andriamparany : Efa nifandovana ny fivarotana lambamena
Mivoatra hatrany ny fikarohan’ny olona manodidina ny lamba landy sy ny lambamena. Ankehitriny, afaka asiana soratsoratra ny lambamena raha hamonosana faty. Anarana na sary amin’ny akanjo sy lamba firakotra raha ny lamba landy
Nandalo fiofanana maromaro, Andriamparany na Mparany, mpivarotra lambamena tetsy akaikin’ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Anosy no nahavitany ireo karazan-tsary sy soratra amin’ny lamba landy na lambamena. Taranaka mpandova fahadimy ny lehilahy raha eo amin’ny sehatry ny varotra sy fanenomana lamba landy sy lambamena.
Zary tsy afa-misaraka amin’ny olombelona ny lamba landy sy ny lambamena. Misy ny fahafatesana isan’andro toy ny fisian’ny zaza teraka. Tato anatin’ny folo taona farany anefa mihena ny fanjifan’ny olona lamba landy na ny lambamena noho ny fahasarotam-piainana. Hany ka lasa mirona amin’ny lamba tavoahangy ny olona. « Mora kokoa ny lamba tavoahangy raha mitaha amin’ny vidin’ny lambamena kanefa tsy mifanalavitra ny fahatezany. Ho anay mpivarotra, mividy ambalonana eny amin’ny mpivarotra ambongadiny fotsiny fa tsy misy fahasahiranana toy ny lamba landy na lambamena » hoy Andriamparany, mandinika ny fidinan’ny fahefa-mividy ny olona.
Nisy ny fiofanana maro nataon’Andriamparany, ny amin’ny fanatsarana ny kalitao sy ny endrika amam-bikan’ny lamba landy sy lambamena. « Tsy mionona fotsiny tamin’ny zava-bitan’ireo ray aman-dreniny teo aloha fa mba mivoatra ho amin’ny tsaratsara kokoa, na kalitao na ny endrika amam-bikan’ ny lamba », hoy Andriamparany, mitantara ny dingana nataony vao nijanona tamin’ny fianarana ka lasa nanenona sy nivarotra lamba landy sy lambamena.
Nanafatra atodin-dandy tany Thaïlande tamin’ny fitondrana teo aloha ny mpanao lamba landy sy lambamena, tetsy akaikin’ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Anosy. « Mora folesina kokoa raha mitahy amin’ny landy gasy. Tsy miraikitra mihitsy rehefa hamadika azy ho kofehy », hoy hatrany Mparany, mitantara ny fahavitan’ny asa fenenomana. Malaky niserana ihany izany anefa.
Nifindrafindra ny toeram-pivarotana lamba landy sy lambamena. Niainga teo Analakely tamin’ny andron’ny ray amandrenin’Andriamparany. Nafindra tetsy amin’ny zaridaina Anosy ka niafara eo akaikin’ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Anosy, ankehitriny. Ankoatran’ny fidinan’ny fahefa-mividy, anisan’ny mampihena ny olona manjifa lambamena ny tsy fankasitrahany manao famadihana intsony noho ny fivavahana kristianina. « Rehefa fotoam-pamadihana no tena nandeha ny tsenan’ny lambamena ankoatran’ny olona mividy hamonosana faty lena. Amin’izao fotoana, mihena ny isan’ny lamba lafo » hoy Andriamparany, manahy ny ho avin’ny tsena sy ny fanjifan’ny olona ny lamba landy sy lambamena. Any amin’ny voninkazo no mihazakazaka ny olona amin’izao fankalazana ny fetin’ny Olo-masina izao raha ny fanamarihan’Andriamparany.
Miakatra kely ny vidin’ny lamba landy na ny lambamena raha asiana satrok’andriana, volom-bola, fehiloha na « couronne » izay anisan’ireo fiofanana azon’Andriamparany. « Mandany fotoana kokoa raha asiana soratra na sary ny lamba iray. Mitombo ny zavatra afangaro sy ampiasaina. Ireo no tombony tamin’ny fiofanana maromaro natao », hoy hatrany Mparany, mitanisa ny tombony azo taorian’ny fiofanana ankoatran’ny lova avy amin’ny ray aman-dreny tamin’ny fanenomana.
Manana fikambanana ny mpivarotra lamba landy sy lambamena etsy akaikin’ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Anosy, tao anatin’ny roapolo taona mahery nikirakiran’izy ireo lamba landy sy lambamena. Raha nionona tamin’ny varotra lambamena famonosan-damba ny maty fotsiny tany aloha, ankehitriny, miditra amin’ny fanjairana akanjo na lamba asampy na karavato na lamban-databatra ny fikambanan’ny mpikirakira lamba landy sy lambamena etsy Anosy. « Manomboka tia mitafy lamba landy na lambamena isika amin’izao fotoana. Somary nanahirana izany fahiny fa ankehitriny hita miavaka mihitsy ny olona iray mitafy lamba landy raha sendra mamonjy lanonana mihaja », hoy Andriamparany, mandrisika ny olona hanjifa lamba landy fa tsy mifanalavitra amin’ireo lamba tsara kalitao ny lamba landy na lambamena.
Hatreto, fianakaviana maromaro no mivelona amin’ny lalam-barotra lamba landy sy ny lambamena. Miainga any amin’ny fiompiana landy ka hatraty amin’ny fivarotana ny lamba landy. Mahitsy, Ambositra, Sahanivotry (Antsirabe) ary Arivonimamo no toeram-piompiana sy famolesana landy ny fikambanana. « Mifampiankina ny fiainanay rehetra ireo na aty amin’ny fivarotana ka hatrany amin’ny mpiompy. Noho izany, mahavelona ny fihariana ny lamba landy sy ny lambamena » hoy hatrany Mparany.
Ankoatran’ny fitsidihana ny toeram-pivarotana etsy akaikin’ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Anosy, azo antsoina amin’ny laharana 034.38.203.52, Andriamamparany.
#3 • Actualites
Conjoncture – CENIstrose ambiante
Conseillers consulaires – “ L’amélioration de la situation des Français à Madagascar, un impératif ”
#2 • Actualites
Organisation des scrutins – Un aCENIssement s’impose
Marché du travail : Des étudiants-entrepreneurs se révèlent